Deg Deg Daawo sawiro:Kulan Hargeisa Xalay Ka Dhacay Oo Loogu Tashanaayo Hartiga iyo Cali khaliif Oo Xaadir ah Kuna Doodaya Hala Tago Yoocada iyo Buuhoodle iyo Cabdiraxmaan cirro Oo Diiday Lana Saftay Tolkiis, | khaatumonews
Deg Deg Daawo sawiro:Kulan Hargeisa Xalay Ka Dhacay Oo Loogu Tashanaayo Hartiga iyo Cali khaliif Oo Xaadir ah Kuna Doodaya Hala Tago Yoocada iyo Buuhoodle iyo Cabdiraxmaan cirro Oo Diiday Lana Saftay Tolkiis,
May 17, 2018 - 10 Aragtiyood
Waxaa magaalada hargeisa ka dhacay xalay Kulan balaadhan oo u soo abaabulay Muuse Biixi cabdi islamarkaana Qorshihiisu ahaa Sidii dagaalka Tukaraq Ee ay Ku jaben maamulka jeegaantu Loo samayn laha Rogaal calin.
Kulnka waxaa Goob Joog Ahaa Inta La Baxday jeegaanta marka laga reebo Oday faysal cali waraabe Oo Dhuuni Iyo masaariin Kula Lamaan muuse Biixi iyo oday cali khaliif galaydh oo Dhiga Faysal ah.
Kulanka waxaa diiday oo aan soo xaadirin Gudoomiyaha Xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro.
Balse Arrinka yaabka leh ayaa ah in cali khaliifna Goob Joog ka ahaado Kulankaasi loogu tashanaayo Tolkiis walibana uu ku doodaayo in La tago Yoocada iyo Buuhoodle.
Ugu Danbayntina Kulankan ayaa ku soo Dhamaaday Musanow iyo Xagxagashada dawlada fadaraalka soomaaliya.
Cali khaliif haddii uu ku doodo yaacada iyo buuhoodle ha la tago, waa runtii, waayo wuxuu doonayaa inuu cod ku dhex yeesho meel uu arkey inuusan cod ku laheyn oo ah SNM dhexdeeda, ficilka cali waxaa loo yaqaanaa Haraatidii ugu dambebeysey uu tuuro dameer sii bakhtiyaya.
Odaygaan Cali Injir waa jiran yahay, 90 jir dadkaygii ha is xasuuqo ku talinaya.
Sow ma oga waxa labada dhinacba jabaya in Dhulbahante yahay oo dhulkooodii lagu dagaalamayo oo shacabka la barakicinayo.
In qolo rayso waa in kumasn dhintaan marka hore, taas ma la ogyahay.
Xabad joojin baan ku baaqayaa, fikirkayga.
Meesha gaajo iyo faqri baa ka muuqata iyo dad rafaadsan oo busaarad dishey oo heedhe somaliland waaba lagu bakhtiyey wallaahaan kuwaan dagaal hal todobaad wadikarin …war nimanka gajaada yaan lagu fiirsan ee ha loo gurmado .
Odeygan gaaban waa khaaniwadan meesha ujoogo cidi kama rabto waa condom waa qashin
Dadkiisii iyo Dhulkiisii ayuu dhex goojaa. Meeshii laga qadarinayayna wuu joogaa. Dagaalku dheef malaha o waa run ee wuxuu leeyahayse dhiifo daba dheeraata. Saasooy tahayse mar mar ayay kugu kaliftaa inaad dagaalanto ood adna dhiig baxdo kuwa kaasoo horjeedada aad faaruqiso.
Hadaba Somaliland waxay taagan tahay Xuduudayadii ayaanu weli ku jirnaa. Puntland qadiyad qabiileysan oo waa hore bakhtiday oo raq ah ayay senta heysaa oo ay kici is leedahay. Xagee lagu arkay neef bakhtiyay oo kacay.
Inta labadaas korner laga kala jooga oo hub la’iskugu heysto wallee inaanan lakala fursaneyn. Dagaalna waa joogto ama shalayna la’is laa. Beritana wuu dhacayaa.
Hadaba xaajada waxa dhameeyay C/Weli Gaas. Wuxuu ka shanqadhiyay waxa ay ka baqayaan. Wuxuu yidhi maalinba kolba meel ayay qabsanayeen, Adhi Cadeeye, Laascaanood, Taleer, Tukaraq. Imikana Garoowe ayay rabaan inay soo dul fadhiistaan. Waxaas yaa yeelaya dee. Goobtaas ugu danbeysay ee uu ka dhawaajiyay ayaa ah nabarka ku taagan. Garoowe ayay soo dul fadhiisan doonaan. Dee taas hadii uu ka baqayo muu Somaliland la hadlo oo yidhaahdo walaalayaalow aynu heshiino. Anuu waxaa ka tanaasulayaa inaan ka hadho qadiyadydii qabiileysneyd ee Hartinimo. Idinkuna Ciidan Xoogan Garoowe dushiisa hasoo dhigina. Arintaas waxa laga gaadhi lahaa heshiish waafi ah. Somaliland waxa ay nabad gelin laheyd Puntland. Xuduudhkana kantaroolo yar yar ayaa laga sameyn lahaa. Iga walee inaanay laba Cali su’aal iska weydiiseen.
Laakiinse haday Puntland ku adkaysato sheekadan riqiiska ah ee Xuduud Hartiyeed oonan jirin baan samaysanayaa iyada ayaa cirka roob ku og. Marka hore gacanteeda kuma jiro dhulkay sheeganaysaa. Dadkii lahaana Somaliland ayuu raacsan yahay in yar mooyaane. Kolkaas ciidan waa la’ogyahay oo waa jab iyo halaag u jooge, bilaash iyo qadiyad madhan yaanay u sadqeyn nafo dhan oo ay bad baadin karayso. Somaliland iyadu teeda wey ku adagtahay oo waxay u aragtaa nafahaas go’ayaa inay xaq ku go’ayaan. Qadiyaduna waa ka dhab oo inay xaqiiijiso ayay ku foogan tahay.
Kolkaas walaalayaaloow inaka bariidiya oo heshiish qaata. Garoowe iyo xadkiina ku ekaada. Anana waxaanu idiin balan qaadeynaa inaanu idin nabad gelino oonan Garoowe Culeys aanaan saarin.
Reerkii daarood ahaa dhaqan aan somali lagu aqoon ayay lasoo baxeen markaad isqabataan sida raga udagaalami mayaane Facebook ayaa lagu yaacaya live ayaaba cay iyo aflagaado lalasoo fadhiisanaya yaab anagaa aragnay
Nacas iska hadley baa meshaan wax ku qorey, Isaaq, Somali diid halkaa waxa gaarsiiyey Daarood neceyb, wax ay noqon karaan malaha, Dowlad baa nala dagaalamey ayey ku doodeen, War dowladu Calankeeda waxey ka taageysaa laascaanood, waxa dhuldaarood idinka yaal ayaa la yaaban yahey, walee weydin eedi, kiinaad waayeysaan hadda hadii dowladu dagaalkaas faraha la soo gasho, idinkaaba u yeerey.
cali khalif waa oday xanuunsanaya jeegaantuu waalayaa si loo xasuuqo walee mararka qaar waa khatar snm god u qoda inkastuu horgale yhy
waa la ogyhy cayda cida quudata laangaab iidooroow dad yr oo masaakiina ayaad tihiin jeegaantana waanu laynay haday naga tegi waayaana waanu xasuuqanaa
Runta ayaad majeerteen u sheegtay. Laakiin majeerteen ogow waa dad qadiyad qabiil kaga dhegtay. C/wali haduu isa sii maqiiqo runtii garoowe baanu soo dul fadhiisan oo qasrigiisaanu argagax galin. Haduu nabada qaatona sheekada harti waa Inuu isaga hadha waayo maanta hartiguu ku doodaya miyay doonayaan? Waa maya, kolay waxa haya xin hawiye wax la yidhaah, sheekadiisuna waa atoor kii maroodiga isku qaadqaaday EE dhakada uu maroodigu ugaga xaaray. Majeerteen israaci ka hor intu degena waa ogaa. Hawiye ayuu wax la qaybsan jiray. Hadase israacii 60 kii buu mooday Inuu hawiye la dherersan karo.